किन गर्छन? कुकुर’ले खुला ठाँऊमा स म्भो ग ? यस्तो छ कारण … – List Khabar
Home / रोचक / किन गर्छन? कुकुर’ले खुला ठाँऊमा स म्भो ग ? यस्तो छ कारण …
किन गर्छन? कुकुर’ले खुला ठाँऊमा स म्भो ग ? यस्तो छ कारण …
admin December 21, 2021 रोचक Leaveacomment 78 Views
के तपाईंले कहिल्यै कु कुरले स म्भोग गरिरहेको देख्नु भएको छ ? देख्नु भएको छैन भने पनि अब दसैं ताका यस्ता दृष्यहरु छ्याप्छ्याप्ती देख्न सकिन्छ । अ सोज र कात्तिक महिनालाई कुकुरहरुका लागि बैं स चढ्ने वा स ह बास गर्ने महिना भनेर भनिन्छ । यो कहानी महाभारत युगदेखि प्रचलित छ ।
द्रौप दीको विवाह कसरी पाँ च भाइ पाण्डवसँग हुन गयो भनेर यसअघि नै प ढिसक्नु भएको छ । अब जान्नुहोस्, के का रणले कुकुर ज हाँसुकै स’म्भोग गरिरहेका भेटिन्छन् भनेर ।
यो क्ष ण द्रौपदी, अर्जुन र भीम तीनै जनाको निम्ति श र्म नाक बन्न पुग्छ । यो कुरालाई लिएर भी म र अर्जुनबीच भ नाभन पनि हुन्छ । भीम महाभारतका अत्यन्त रिसा हा पात्र थिए ।
उनले अर्जुनसँग ख राउ राख्ने सर्तका बारेमा बहस गर्छन् तर अर्जुन बिन्ति गर्छन् ‘हे भ्रा ता श्री बाहिर हजुरका चरणआशन देखेको भए यस्तो अनर्थ हुने थिएन, क्ष मा चाहन्छु, परन्तू पादुका ढोकामा छैनन् ।
यो सुनेर सबैजना अलमल्ल पर्दछन् र तिनै जना भीमका खराउ खोज्न बनबिहारमा निस्कन्छन् । निकै पर एउटा कु कुर भीमका खराउसँग खेलिरहेको देखेर क्रो धित बनेकी द्रौपदीले श्रा प दिँदै भनिन्,
‘यस कुकुुरका कारण मैले यौ नक्रि डा गरेको आज अ र्को पतिले देखेर जुन श र्म मैले सहनु प¥यो । सो ही दृष्य दुनियाँले दे खुन् र म जस्तै हि नताबोध र ला जले गुज्रिनु परोस् ।’ त्यस यता कुकुरहरु खुल्लामै यौ न क्रिडा गरिरहेका हुन्छन् भन्ने क था छ ।
Previous मोटी के”टीसंग बिहे गर्दा फाइदै फाइदा हेर्नुहोस पूरा जानकारी
Next असाध्यै बोल्ड नेपालकी भेटेरिनरी डाक्टर टिकटकमा भाइरल, को हुन् उनी ? (भिडियो)